Iva China 3M-150M Telecom Towers Manufacture uye Fekitori |XY Tower
Iyo shongwe yekutaurirana ndeyemhando yechiratidzo chekufambisa shongwe, inonziwo chiratidzo chekufambisa shongwe kana shongwe yechiratidzo.Basa guru rinotsigira kufambisa kwechiratidzo uye inotsigira chiratidzo chekutumira antenna.Inoshandisa mobile/unicom/traffic satellite positioning system (GPS) nemamwe madhipatimendi ekutaurirana.Moto kudzidzisa shongwe.
Iyo shongwe yekutaurirana inoumbwa nesimbi senge shongwe muviri, chikuva, mheni tsvimbo, manera, antenna rutsigiro, nezvimwewo, uye inobatwa nekupisa-dip galvanizing uye anti-corrosion kurapwa.Inonyanya kushandiswa kutapurirana uye kuendesa microwave, ultrashort wave uye isina waya network masaini.
Kuti ive nechokwadi chekushanda kwakajairwa kweiyo isina waya yekutaurirana system, iyo antenna yekutaura inowanzoiswa panzvimbo yepamusoro kuti iwedzere sevhisi radius kuti iwane inodiwa yekutaurirana maitiro.
Iyo antenna yekutaurirana inofanirwa kunge iine shongwe yekutaurirana kuti iwedzere kureba, saka shongwe yekutaurirana inoita basa rakakosha muhurongwa hwekutaurirana network.
Urefu Kubva ku10M-100M kana zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi
Shape Polygonal kana Conical
Material Kazhinji Q235B/A36,Yeild Strength≥235MPa
Pamwe neHot Rolled coil kubva kuASTM572, GR65, GR50, SS400
Kushivirira kwedimension Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi
Kurapa kwepamusoro Kupisa-dip-galvanized inotevera ASTM123, kana chero imwe chiyero nezvinodiwa nemutengi
Joint of Poles Slip joint, flanged yakabatana
Hurefu hwechikamu chimwe nechimwe Mukati me13M kamwe chete kugadzira
Packages Kurongedza nemapepa epurasitiki kana zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi
Nguva yeHupenyu Anopfuura makore 25, zvinoenderana nekuisa nharaunda
Guyed tower ine chitarisiko chitsva, uye hunhu hwayo hukuru hunosimbiswa nekushandisa simbi mukomana waya.
Guyed tower imhando yakajairika yekutaurirana shongwe iyo ine hupfumi uye inoshanda.
Yakareruka uye yakachipa kupfuura mamwe.
Yakanyatsokodzeraiyo geographical yakakura nzvimbo.
Self inotsigira shongwe inowanzoita 3leg ye4leg tower, uye zvinhu zvayo isimbi pombi kana angle simbi.Kana iri yekubatanidza, tubular shongwe yakabatana neflange, uye angle simbi shongwe inobatanidzwa nenzungu nemabhaudhi.
1.kupikisa mhepo yakasimba.
Diki coefficient yemhepo inotakura,
2.Save chitubu chevhu, nzvimbo yakanakira.
3.Convenient kutakura uye kuiswa.
Single tube tower inonziwo monopole tower, ine chitarisiko chakanaka, inovhara nzvimbo diki ye9 kusvika 18 square mita, inodhura - inoshanda, uye inogamuchirwa neruzhinji rwekuvaka.Tower body inotora chikamu chinonzwisisika, icho chakabatana kuburikidza nepamusoro simba bhaudhi.Iyo ine hunhu hwekumisikidza nyore uye inogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana dzakaoma nzvimbo saiti.
Camouflaged Tree Shongwe zvakare imhando yemiti yemiti yeBionic muti tower, pahwaro senge chaiyo, pamwe nehunyanzvi dhizaini, kana yaiswa pakati pemiti chaiyo munzvimbo yekuona, paki uye sikweya, ichave chikamu chezvisikwa.
1. Chimiro chakanaka, chitarisiko chakanaka.
2. Kugadzikana kwakasimba kwemaitiro, hupenyu hurefu hwekushanda.
3. Diki nzvimbo inovhara, yakakura yehupfumi mhedzisiro.
Fekitari Yakananga Kutengesa, Ipfupi Yekutungamirira Nguva, Hunhu Simbiso, Tarisa pane simbi shongwe dhizaini, kugadzira uye kutumira kunze kwenyika kwemakore mashanu.
Wana mamwe mashoko izvozvi!
Zvakapfuura: 10KV-500KV Transmission Tower
Zvinotevera: Magetsi Substation Maumbirwo